Times24 Nepal » रवि लामिछानेका सर्मथकलाई भेडाको संज्ञा दिँदै करिश्माले लेखिन् यस्तो स्टाटस्
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै उनले रवी समर्थकहरुलाई भेडाको संज्ञा दिएकी छिन्
अहिले चर्चामा रहेको शालिकराम पुडासैनी मृत्युलाई लिएर चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरले मुख खोलेकी छिन् । शालिकरामलाई आत्मह’त्या गर्न बाध्य पारेको अभियोगमा अहिले पत्रकार लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की अहिले हिरा’सतमा बसेका छन् । अहिले लामिछाने समर्थकहरुले विरोध पनी जनाउँदै आइरहेका छन् ।
यस विषयमा मानन्धरले भिडले कसैलाई न्याय दिन नसक्ने भएको हुँदा यसमा दबाब दिन खोज्नु गलत्त भएको जानकारी दिएकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै उनले रवी समर्थकहरुलाई भेडाको संज्ञा दिएकी छिन् । उनको यो स्टाटसलाई लिएर अहिले उनको विरोध पनी भइरहेको छ ।
उनको स्टाटस यस्तो छ।
राज्यले गर्नुपर्ने कामकाज निजितवर बाट हुनु खतरनाक हुन्छ ! नत्र किन चाहियो संसद, संविधान, राज्य समयन्त्र ? यत्रो तिरो तिरी रहेको छौ । तपाईंहरुले नैतिकता न–गुमाएको भए यो समस्या आउने थिएन । अब गंगामा हात धुनेले आँट गरे । पहिल्यै भनेको थिए येस्तो स्वतन्त्रताले अराजकता निम्त्याउँछ । सानो देशको व्यवस्था र संबंधित निकायलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने कस्तो सरकार ? अब भोग्नुस ! भेडाहरु को कोलाहाल ! सत्य तितो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति १ भाद्र २०७६, आईतवार ०३:२८